एकता प्रतिवेदन तयार नहुनुमा विष्णु पौडेल भिलेन बनेको खुलासा ! – रिपोर्टर्स नेपाल
एकता प्रतिवेदन तयार नहुनुमा विष्णु पौडेल भिलेन बनेको खुलासा !
२०७५ माघ २६ गते प्रकाशित, l १७:३३
काठमाडौं, २६ माघ । सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले अहिलेसम्म सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। तर, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुको मुख्य कारण विष्णु पौडेलको भूमिका रहेको बुझिएको छ ।
सचिवालयले हालसम्म भएका प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएपछि व्यस्त बनेको कार्यदलको बैठक पछिल्लो समय प्रभावित बन्दै आएको छ । हलै बसेको कार्यदल बैठकमा सदस्यबीच नै प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा विवाद भएको कुरा बाहिर आएको थियो । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिलेसम्मको प्रगति समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव गरेका थिए भने अन्य सदस्यले सहमति भएका र सहमति हुन बाँकी विषय छुट्याएर मात्र प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
तत्कालिन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको ९ महिना हुन लाग्दासमेत तल्लो तह, भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको एकता भएको छैन । एकताको बाँकी काम सक्ने विधि, प्रक्रिया र आधार तय गर्न नेकपाको स्थायी समितिको गत पुस १३ गते बसेको बैठकले ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलका एक सदस्यले नेता पौडेलविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका छन् । उनले नाम नबताउने शर्तमा भने,‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुको प्रमुख कारण नै विष्णु पौडेलको हात छ । न त कामै नै भयो ।’
विप्लवले समातेको बाटो नै गलत छ : ज्ञवाली